Ndi mmadu vs. | Martech Zone
Laa azụ na 2016 mgbe nkata ghọrọ onye ama ama, mmadụ niile kwuru na ha ga-anọchi ndị ọrụ mmadụ na ngalaba nlekọta ndị ahịa. Mgbe ị chịkọtara afọ 2.5 nke ahụmịhe gbasara ozi nkata ozi eziokwu dị ntakịrị taa.
Ajuju abughi banyere nkata nkata dochie mmadu, kama obu otu nkata si aru oru ha na mmadu.
Chatbot tech bụ nnukwu nkwa na mbido. Na-azọrọ ịza ajụjụ ndị ahịa n'ụzọ mkparịta ụka, ma nye mmadụ dị ka enyemaka n'okwu a na-eme ugboro ugboro. Ọ tụgharịrị na teknụzụ na ọnọdụ ya ugbu a enweghị ike ibi ndụ na nkwa a. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na 70% ọdịda ọdịda,nke hapụrụ azịza ajụjụ ndị ahịa ma mepụta ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma.
Facebook meghachiri ngwa ngwa ma degharịa atụmanya gbasara nkata. Kama iji mkparịta ụka ederede mkparịta ụka gbara ndị mmepe ume ka ha wulite mmekọrịta mmekọrịta. UX emeziri ka ndị ahịa na-enweta akara dị iche iche na UI ozi. Facebook kwụsịrị iji okwu ahụ nkata ma ugbu a, ọ na-akpọ bọtịnụ mmekọrịta a ozi ahụmahụ. Site na mbufe a, ọrụ nke ndị akparịta ụka gbanwere site na ijikwa mkparịta ụka maka ịmepụta ọwa ọrụ onwe gị (IVR dị ka) maka ajụjụ ndị ahịa Tier 1.
Isi ọrụ nke akparịta ụka gbanwere site na nlekọta ndị ahịa maka ọrụ metụtara ahịa. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ taa dị ka ihe mbụ metụtara ịkpọtụrụ ndị ahịa ma dabere na enyemaka mmadụ ozugbo ndị ahịa chọrọ ka sie ike.
Echere m na ọ dị mma otú ahụ!
Ọdịnihu nke Nlekọta Ndị Ahịa dabeere na Nkata
Ọdịnihu nke nkata ndị ahịa na-akparịta ụka ga-abụ ngwakọ ngwakọ ebe bọọlụ nọ n'ahịrị n'ihu na ụmụ mmadụ bụ ndị a na-ejikarị eme ihe.
Bots ga-erute n'ike nke ọtụtụ ndị ahịa, ụmụ mmadụ ga-ejikwa ndị ruru eru na-emeso ya.
Bots ga - enyere ndị ahịa aka ịnyagharịa na Ajụjụ dị ka dọkụmentị, ụmụ mmadụ ga - abanyekwa ma ọ bụrụ na ajụjụ ndị ahịa ahụ dị mgbagwoju anya.
Bots ga-anapụta nnukwu ụzọ nke ngwaahịa chọpụtara, na-akwado ahịa na a scalable ụzọ na ụmụ mmadụ ga-emeso ndị ahịa na-elekọta mkparịta ụka.
Ọ bụ ihe dị mma na ụlọ ọrụ na-enwe ọnwụnwa ka ha ghara ịchọta nkata nkata ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọnụ ahịa ndị mmadụ na ọnụ ahịa na-agbanwe agbanwe. Ọ dịkwa mma iji rụọ ọrụ na mkparịta ụka nke na-achọghị ọmịiko mmadụ. Mana ọmịiko mmadụ enweghị ike iji aka ya rụọ ọrụ. Ohere ndị dị mkpa maka uto na-ezu ike n'iwulite njikọ nke mmetụta uche na ndị ahịa site na ahụmịhe nke onwe. Ọ bụrụ na onye ahịa echee nlekọta onwe ya, ọ ga-adịrịrị mfe ịzụta ọzọ. Site na ịkwụ ụgwọ nnweta ndị ahịa, ịkwesịrị ijide n'aka na ndị ahịa ị nwetara na-abịa ugboro ugboro.
"… Ka mma" kariri "ngwa ngwa."
Ezie na ahịa ndị chere na a ika awa ngwa ngwa ọrụ, bụ ugboro isii ọzọ yiri ka a ga-ukwuu aku. Ahịa ndị nyere ika ezigbo ratings na “ndị mmadụ” ihe (dị ka ndị ahịa na-elekọta gị n'ụlọnga si n'ikike na njikere inyere) bụ ugboro itoolu yikarịrị ka a n'ụzọ zuru ezu aku.
Ihe ịma aka bụ chọta nguzozi n’etiti ihe ohuru na odi nkpa. Igodo nke ịmụmụ ọnụ ọchị na ndị ahịa gị bụ maka ịchọta ezi nguzozi n'etiti ọrụ akpaghị aka na nlekọta onwe onye.
Ọ dabara nke ọma, nkata abụghị naanị otu ụzọ teknụzụ nwere ike isi nyere ụmụ mmadụ aka. E nwere ụzọ dị mfe iji mee ka ndị ọrụ mmadụ na-arụpụta ihe na-eme ka ọnụọgụ nke onye na-akparịta ụka nwere ike inye ndị ahịa.
Mmetụta nke iji AI na ndị ahịa na-elekọta mmadụ nwere ike ọ gaghị eduga na mbelata ọrụ ọrụ ndị ahịa. Kama nke ahụ, ụdị nwere ike iji arụpụtawanye ụba iji nye ọrụ dị elu karịa nke otu ụdị otu. AI na - enyere onye na - akparita ụka nkata aka iji ihe ọmụma dị mkpa dị mkpa iji zaa ajụjụ ndị ọkaibe karịa.
"AI ga-aghọ teknụzụ okpokoro okpokoro, dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ịnọgide na-asọmpi na ohere ọrụ ndị ahịa."
Mmụta igwe nwere ike ịbawanye ikike ndị na - akparịta ụka n 'ụzọ ga - enyere ha aka idobe onwe ha. Ebumnuche anyị na Chatler.ai bụ ịchekwa oge nke ndị na-akparịta ụka, site na ịme ka ọmụma nkata nwekwuo ike ịnweta, ma na-atụ aro azịza kachasị mkpa maka ndị na-akparịta ụka na ajụjụ ndị na-abata. Chatler.ai na-anọchi ọrụ “Find-copy-paste” nke na-adịghị arụpụta ihe na ugboro ugboro nke ndị na-eme nkata site na ịrụ ọrụ na-ebu ibu karịa mmadụ. Algọridim dị mma nwere ike nyochaa akụkọ nkata ma kwado azịza maka ajụjụ a na-ajụkarị. Mụ mmadụ na-eme mkpebi ikpeazụ ma tinye aka nke onwe ha na ozi ọ bụla na-ejide n'aka na onye ahịa ahụ nwere mmetụta na enwere ekele. Nkata teknụzụ Chatler.ai na-enyere ụdị aka ịnye ọsọ ọsọ, azịza ziri ezi ma na-agbanwe agbanwe mmeghachi omume ndị ahịa.
na Chatler.ai ị nwere ike ijikwa ọnụ ọgụgụ nke mkparịta ụka nlekọta ndị ahịa na otu otu. Kwe ka mmadu jikwaa mkparita uka di nkpa. Mee ka AI nyere gị aka ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị nkata na-arapara.
Chọpụta ihe banyere otu esi eme ya Nkata nwere ike inyere gị aka taa ịnapụta ezigbo ahụmịhe ndị ahịa ma bulie iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ịzụrụ.
Banye maka a Free Chatler Akaụntụ
Tags: ainkataonye nkata